कुंडली: मकर पुरुष र महिला धनु को अनुकूलता
मकर पुरुष को अनुकूलता र महिला धनु राम्रो रूपमा मूल्यांकन छ। तिनीहरूले धरती र आगो को तत्व हौं। केही अवस्थामा, यो सम्बन्ध धेरै सफल हुन सक्छ। यो सम्बन्ध मा मुख्य कुरा हो - तुरुन्तै प्राथमिकता सेट र प्रभाव को क्षेत्रहरू विभाजन। साझेदार सबै भन्दा राम्रो गुण विकास गर्न र सम्झौता गर्न, "विजय को युद्ध" सञ्चालन गर्न पर्याप्त बुद्धिमानी हुनेछ भने, त्यसपछि यो संघ खुसी हुनेछन्। डेम को मामिलामा र चुन्नु को योजना साधारण जमीन खोजी गर्न आवश्यक छ। मकर पुरुष र महिला धनु को अनुकूलता बौद्धिक स्तर साझेदार मा हदसम्म निर्भर छ।
सम्बन्ध र संभावनाहरु को षड्यन्त्र
पार्थिव मान्छे - प्रेम महिला धनु पर्नु गर्न सजिलो पर्याप्त छ जो प्रकार छ। साइन मकर यसको प्रतिनिधिको rationality, अनुशासन, लगनशील भई लागिरहेमा र समर्पण जस्ता सुविधाहरू दिन्छ। मानिस, पनि, एक जीवन साथी, तपाईं को लागि रोज्न सक्नुहुन्छ जहाँ मा महिला उम्मेदवार रूपमा महिला Sagittarian विचार छ। यी अद्भुत सम्बन्ध तेजी विकसित गर्छन। साझेदार सामान्य धेरै छन्। तिनीहरूले परिवार र जीवनमा यस्तै दृश्य, साथै भविष्यमा को दृष्टि छ। तथापि, मतभेद पनि छुटेको छ। तसर्थ, पुरुष र मकर को महिला, लामो अवधि मा धनु अनुकूलता पारस्परिक समझदारी र समझौता मा निर्भर गर्दछ। बिना यो जोडी निर्माण गर्दैन आनन्द आपसी प्रयास बाटो। दुवै साझेदार केही बलिदान हुनेछ, तर तिनीहरू सफलता को संभावना बढ्छ जो पर्याप्तता र साधारण अर्थमा, साझेदारी गर्नुहोस्।
पार्थिव मान्छे - हुनत यो गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति आँखा गर्न शायद सजिलै देखिने छ प्रकृति, विरोधाभासी छ। बस आफ्नो भित्री संसार, उहाँले ध्यान आउटसाइडर्स लुकाउँछ। पुरुष Capricorns एक ठूलो आन्तरिक अनुशासन, आत्म-विश्वास, विश्लेषणात्मक मन र rationality द्वारा विशेषता छन्। बाह्य manifestations मा गंभीर हो र केही चिसो छन्। तथापि, कठोरता र संयम तिनीहरू पनि नजिक छैनन् मानिसहरूलाई मात्र देखा पर्न। आफ्नो सबै कार्यहरू राम्ररी चयन र आन्तरिक निर्देशन र कानुन विषय हो। तर यो मोहरा गंभीर daydreaming, स्वभाव र भावना पछि। महिला, पृथ्वी खोल्न मानिसलाई गर्न सक्षम हुनेछ, आनंद से छक्क। Capricorns धेरै बलियो र प्रतिरोधी हो। तिनीहरूले प्रणालीबद्ध आफ्नो लक्ष्य बाटो मा कुनै पनि अवरोध नष्ट। यी मानिसहरू भाँचिएको जो कोहीले हुनेछ यस्ता कठिनाइ, हटाउन सक्षम छन्।
आगो महिलाहरु, मैत्री खुला छ, सत्कार र स्वागत छन्। धनु को मुख्य विशेषता असीम इमानदारी छ। यस कारण, थुप्रै मानिसहरूले पनि सीधा र व्यवहारकुशल नभएको हो लाग्छ। Dame-धनु, सत्य मान्छे बताइरहेका, सही कुरा र गरिरहेको तिनीहरूलाई अझ राम्रो बनाउन, र अपमान गणना छैन भनेर विश्वास गर्दछन्। यी महिलाहरु यात्रा को धेरै रुचाउनु छन्। तथापि, तिनीहरूले कहिल्यै अग्रिम केहि योजना। सबै spontaneously हुन्छ। धनु महिला - स्वतन्त्रता-मायालु को प्रकृति, विवाह त धेरै उत्सुक छैन। यो पनि यस को एक सानो डर छ, तर तपाईं कसैले आफ्नो जीवन सम्बद्ध निर्णय भने, यो असल पत्नी र एक Mistress बन्नेछ। महिलाहरु धनु अक्सर flighty। अक्सर, एक आगोको महिला र त्यो उहाँले के चाहनुहुन्छ थाहा छैन, र मात्र एक मनपर्ने, तर सेतो गर्मी यसलाई ल्याउन सक्छ के चुन्नु। मकर Horoscope धनु भन्छन् यस्तो संघ भनेर मात्र आपसी सहुलियत यदि सफल हुन सक्छ।
यौन आकर्षण र यस्तो सम्बन्ध मा यौन सम्बन्ध मामलामा सबै सही थियो। धनु शाब्दिक, आफ्नो साझेदार आफ्नो असीम ऊर्जा ignites यो अद्भुत छ र आफ्नो काखमा भूल गर्न सजिलो बनाउँछ। मकर मानिस यो धेरै हार्डी छ र आफ्नो महिला जस्तो प्रयोग गरिरहेका, आपत्ति छैन। उहाँले उनको गहिरो प्रकृति र भावना, साथै आफ्नो equanimity छक्कै पर्छन्। मकर पुरुष र महिला धनु को अनुकूलता एकदम यौन मामलामा उच्च छ। साझेदार प्रत्येक अन्य बाहिर सबै भन्दा राम्रो ल्याउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो मा घनिष्ठ जीवन दबाव सधैं वर्तमान, विविधता र आवेग छ।
मकर पुरुष र महिला धनु को अनुकूलता एकदम उच्च र बच्चाहरु को सम्बन्ध छ। तर, आफ्नो अलि फरक को शिक्षा नजिकिंदै। छोराछोरी लागि सबै गर्छ र तिनीहरूलाई धेरै समय दिनुहुने मायालु र ध्यान दिएर बुबा - मकर। धनु - धेरै आविष्कारशील र Eccentric आमा बच्चा दिन चासोको विषय सक्षम र धेरै। यस्तो जोडी, नियम, तिनीहरू स्वस्थ र नैतिक पूरा बच्चाहरु बढ्न।
सिंहको मानिस, कन्या, मेष, Scorpio कसरी फर्कन
शक्तिशाली amulets: एक पत्थर सुट लेव
कुंभ र तुला। पूर्णता को कगार मा अनुकूलता
नाम Dasha मूल्य
व्यक्ति, चूहा को वर्ष मा जन्म
आफ्नो कुकुर जीवन उत्पादनहरु लागि 13 खतरनाक: आफ्नो पाल्तु जनावर गर्न दे छैन
गुगल मा एक साइट को पदोन्नति - कसरी यो सही गर्न? Seosfera एजेन्सी सिफारिस
प्रयोग क्रेडिट कार्ड बचत बैंक को नियम: वर्णन, प्रयोगकर्ता मूल्यांकन र समीक्षा
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा स्टेशन: एक संक्षिप्त digression
जीवनी, क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन: समूह नमस्ते-फाइ Olesya Lipchanskaya को गायक
बायोप्सी बायोप्सी असामंजस्य
यदि एक मायालु व्यक्तिले एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने के गर्ने?
ब्रेसहरू के हुन्?
घर लागि बाड र बाड को प्रकार। प्यानल बाड। वेल्डेड बाड
ग्राहक-सर्भर वास्तुकला: अन्तरक्रिया को सुविधाहरू